Vokatry ny mpiambina amin'ny alàlan'ny fakantsary miady amin'ny vatana | Vahaolana OMG
Fiantraikany amin'ny mpiambina fiarovana amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana
Any Azia, ny faritra izay anaovan'ny mpiasan'ny polisy fakantsary vatana dia mihamitombo haingana mba hampihenana ny herisetra eo amin'ny polisy sy ny olom-pirenena. Mino marim-pototra fa ny fiparitaky ny teknolojia fakantsary dia hanazava ny andraikitry ny polisy, ka hanatsarana ny filaminan'ny olom-pirenena. Na izany aza, zara loatra ny angon-drakitra azo ampiasaina ho fototry ny fanatsarana ny fiarovana.
Mino ny Polisy fa ny fakantsary mitafy vatana dia afaka manatsara ny fahafahan'ny polisy manadihady sy manatsara ny mangarahara sy ny fandraisana andraikitra amin'ny asan'ny polisy. Ny polisy sasany dia manana fakan-tsary mitafy vatana mba hizahana ny fahombiazany. Ny ekipan'ny polisy dia naneho ny fahafaham-pony tamin'ny valin'ny fitsapana satria ny sary nalaina tamin'ny fakantsary mitafy vatana dia marina kokoa noho ny fampisehoana am-bava.
Mihevitra ny olona sasany fa ny fakantsary mitafy volo dia ahafahan'ny polisy mikaroka amin'ny fomba kendrena, tompon'andraikitra ary mangarahara kokoa, amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny fampiharana ny lalàna. Na izany aza, miahiahy ny Mpikambana sasany satria satria ny polisy dia afaka manapa-kevitra hoe “hanoratra na tsia na rahoviana vao hanomboka firaketana” ary ny polisy kosa dia tsy voarakitra, ny fakan-tsarimihetsika vita amin'ny vatana dia mety tsy afaka manolotra ny tranga amin'ny fomba feno sy marina. Ary koa, ny fakantsary mitafy vatana dia mety manangona vaovao sy angona bebe kokoa noho izay ilaina amin'ny fampiharana ny lalàna, miteraka ahiahy amin'ny olan'ny fiarovana manokana.
Fiarovana bebe kokoa ho an'ny olom-pirenena sy ny polisy?
Tany am-boalohany, ny cams-body dia nosedrain'ny vatana fampiharana ny lalàna. Tokony hojerena ny fanaraha-maso ary raha efa lehibe ny teknolojia. Fa inona marina no tokony ataon'ireo fakan-tsary? Izahay dia mijery ny teknolojia vaovao avy amin'ny zoro manokana.
Ny body-cams dia tokony hiaro ny polisy amin'ny fanafihana
Ny fanaraha-maso ny horonantsary dia ampiasaina betsaka amin'ny fananana tsy miankina mba hiarovana ny fananan'ireo olon-dratsy. Raha toa ka tsy mampiseho ny faritra tsy miankina fotsiny ny fizarana sary dia avela ny fampiasana. Ho an'ny fanaraha-maso horonantsary any amin'ny faritra misy be dia be ny fameperana lehibe, izay nanery ny Filan-kevitra federaly manapa-kevitra ny fampiasana fakantsary vatana.
Ireo polisy mitafy fakan-tsary dia azo fantarina amin'ny fanamarihana amin'ny soratra hoe "Rakipeo horonantsary". Na izany aza, tsy mandeha maharitra ireo fakantsary. Raha misy ny fifanolanana tsy ho ela dia alohan'ny tompon'andraikitra ny fakantsary.
Mandritra izany fotoana izany, ny mpanohana ny haitao fiarovana vaovao dia manantitrantitra fa tsy ireo mpiasan'ny polisy ihany no tokony hiarovana ny tenany. Hatramin'ny miverimberina matetika ny herisetra ataon'ny polisy dia tokony hampiasaina koa ireo fakantsary raha sanatria ka hitaona ny manamboninahitry ny polisy any amin'ny fitsarana ho porofo. Azo atao tsara ny manamarina raha tena ivelan'ny rafitry ny mahazatra tokoa ny asan'ny tompon'andraikitra.
Inona no fiantraikan'ny olona tompon'andraikitra amin'ny fampiasana ny body-cams?
Ny herisetra sy ny tsy fanajana ny polisy dia tokony ho tafiditra ao
Ny rameva-vatana dia tokony hisy fiantraikany amin'ny fisorohana ireo mety ho mpandika herisetra
Amin'ny vonjy maika, ny firaketana horonantsary amin'ny fifandirana ara-dalàna dia tokony ho porofo
Ny cams-body koa dia tokony hiteraka fanerena hampifanarahana amin'ny polisy, izay mahatonga azy ireo hitondra tena tsara
Amin'ny ankapobeny, mifototra amin'ny traikefa eo an-toerana sy any ivelany, ny polisy dia manara-maso miaraka amin'ny fakantsary manana vatana misy tombony manaraka ireto:
(a) Ny firaketana an-tsoratra ny fisehoan-javatra tsy azo ianteherana: Ireo clip video ireo dia mety hanatsara ny fandraisana andraikitry ny mpitandro ny filaminana sy ny fitokisan'ny vahoaka ny herin'ny polisy noho ny fakan-tsary fakan-tsary na sary fakan-tsary;
(b) Manamora ny famotorana sy ny fanenjehana: Azon'ny polisy ampiasaina ny fakantsary nakan'ny fakantsary raikitra ho faty ho porofon'ny fanadihadiana bebe kokoa amin'ny asan-jiolahy. Raha manapa-kevitra ny hanenjehana ny polisy, ny sombin-javatra mifandraika dia azo ampiasaina mba hanomezana porofo any amin'ny fitsarana;
(c) manafaingana ny famahana ny fitarainana na fanaratsiana olona: ny fahazoana fakantsary nosamborin'ny fakantsary miakanjoana dia mety hampihena ny fifamaliana amin'ny porofo ary manafaingana ny famahana ny fitarainana sy Litigation;
(d) Mampiady ny ady: Ny fakan-tsary azo ampiasaina amin'ny vatana dia heverina ho misy fihenjanana ary mety hahomby amin'ny fitondran-tena mafy. Rehefa fantatry ny besinimaro hoe alefa sary izy ireo, dia milamina izy ireo ary ahena ny fifanolanana eo amin'ny polisy sy ny sivily.
Etsy ankilany, nahasarika ny saina sy ny fisalasalana ihany koa ny fampiasana fakan-tsary mifono vatana amin'ny fampiharana ny lalàna, ao anatin'izany:
(a) Ny polisy dia mety hampitombo ny fampiasan-kery amin'ny toe-javatra sasany: Araka ny fanadihadiana iray, amin'ny fizotran'ny fifandraisan'ny polisy-sivily, raha toa ny mpitandro ny filaminana dia manana finiavana bebe kokoa hanapa-kevitra hoe rahoviana no hamadika sy hampiakatra ilay polisy fakan-tsary, na hampitombo ny polisy ny fotoana mety hampiasa hery.
(b) Olana amin'ny fiainana manokana: Voalohany, satria manana fahalalahana feno ny mpitandro ny filaminana hanapa-kevitra hoe rahoviana hanombohana sy hanajanonana ny firaketana, dia misy ny ahiahy mety handraisan'ireo polisy ny sombintsombiny tsy mifandraika amin'ny heloka bevava. Faharoa, ny mpitandro filaminana dia mety maka sary ny zava-niaina nampahory an'ireo niharan'ny heloka bevava ary ireo olona voakasik'ilay fanavotana na lozam-pifamoivoizana amin'ny fakan-tsary mihetsika tsy mahomby amin'ny fandikana ny sitrapon'ny mpaka sary. Farany, misy ny ahiahy momba ny fampiasana fakan-tsary mihetsika amin'ny alàlan'ny finday izay mety hanitsakitsaka ny zon'olombelona na ny tombontsoan'ny lalàna sasany (toa ny vavolombelona, ​​ny mpampahalala vaovao miafina, ny niharam-boina, ny olona mila manao akanjo ivelany mba hikarohana, sns).
(c) Zo miditra amin'ny angon-drakitra manokana: Araka ny lalàna mifandraika amin'ny fiarovana ny angon-drakitra manokana, ny olon'ny besinimaro dia mety miditra amin'ny rakitsary lahatsary misy fakan-tsary mihetsika misy ny sarin'izy ireo. Satria mety mila mandrakotra ny sary tsy misy ifandraisany amin'ireo rakitsary ireo ny manampahefana, dia mety hampisy vesatra fanampiny eo amin'ny polisy izany.
Ho valin'ireo ahiahy voalaza etsy ambony ireo dia misy “torolàlana mazava sy henjana” mifehy ny fampiasana fakantsary fakan-tsary azo entina:
(a) Miorina amin'ny hetsika iray ny horonantsary: ny fakantsary mitafy vatana dia tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny "sehatra fifandonana" na "raha misy fandriampahalemana ara-tsosialy niseho na mety nitranga";
b) Manoro hevitra ireo antoko alohan'ny horonan-tsary: Ireo pôlisy izay mampiasa fakan-tsary miakanjo dia tsy maintsy manao fanamiana ary ahantona ny fakan-tsary mihetsika amin'ny vatana amin'ny fanamiana. Tsy azo ampiharina eo amin'ny tontolo iainana io, raha tsy izany dia tsy maintsy mampahafantatra mialoha ny antoko ny polisy alohan'ny hanombohan'ny fandraisam-peo. Mandritra ny fizotry ny firaketana, ny safidin'ny fakantsary fakantsary dia mihena ny mena, ary ny efijery ivelany ivelany dia hampahafantatra ny fety fa efa voarakitra izy ary afaka mahita ilay sary voarakitra. Rehefa manomboka mirakitra ny firaketana ny polisy dia tsy maintsy anoratany voalohany ny anarany, ny fotoana sy ny toerana anaovana horonantsary ary famaritana ny hetsika tokony hosoratana;
c) Ravao ny sary mihetsika izay tsy misy lanjany amin'ny fitsapana: Ireo horonan-tsary izay heverina fa mifandraika amin'ny fanadihadiana dia avadika ho CD-ROM roa, ka ny iray ho porofo ary ny iray kosa ho toy ny dika mitovy amin'ny asa hanaovana fanadihadiana. Ny horonan-tsarimihetsika izay tsy iharan'ny famotopotorana na porofo ny sanda dia haringana aorian'ny andro 31 manomboka amin'ny datin'ny filma; ary
(d) Fangatahana miafina: Araka ny voalazan'ny Ordinance ho an'ny tena manokana (tsiambaratelo), ny vahoaka dia manan-jo hangataka ny fidirana amin'ny angon-drakitra manokana ataon'ny polisy, ao anatin'izany ny sary mihetsika. Ireo fangatahana rehetra ireo dia ho zahana amin'ny Fitsipika.
Tsy hita ny fandalinana azo itokisana amin'izao fotoana izao, izay manaporofo fa ny fampiasana Body-cams dia mitondra ny vokatra irina avy amin'ireo sendika sy ireo mpanao politika.
Ambonin'ny zava-drehetra dia manantena ny minisitry ny atitany sy ny sendikan'ny polisy fa hanomezana fiarovana bebe kokoa ho an'ireo manamboninahitra ny fampiasana ny body-cams. Noho izany, ireo firenena hafa ao anatin'ny tsipika fanjohian-kevitra dia ezahina, izay anaporofoana ny fampiasana ny body-cams hatreto.
Fiantraikany amin'ny mpiambina fiarovana amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana no farany niova: Desambra 2nd, 2019 by Admin
4906 Total Views 1 Views Today